သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ချစ်စရာပုံလေးတွေတင်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ချွဲလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး –7Day Daily News
သူမတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့ မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့လေးမှာ ချစ်စရာပုံလေးတွေတင်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ချွဲလိုက်တဲ့ ယွန်းဝတီလွင်မိုး
အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ တစ်ချိန်ကအောင်မြင်မှုထိပ်ဆုံးမှာ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့အကယ်ဒမီမင်းသားကြီးလွင်မိုးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်.. လွင်မိုးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ပြီး ခုချိန်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးတွေနဲ့ အောင်မြင်တဲ့စီ းပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်လို့ ပြောလို့ရနေပါပြီနော်…
လွင်မိုးကတော့ အနုပညာမျိုးဆက်လေးဖြစ်တဲ့ သမီးဖြစ်သူ ယွန်းဝတီလွင်မိုး နဲ့အတူမြေးလေးဖြစ်သူ Liam လေးကိုလည်း ပရိသတ်တွေကချစ်ခင်အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..ယွန်းဝတီလွင်မိုးကတော့ လက်ရှိမှာ ပြည်ပနိုင်ငံ တွင် ပညာသင်ကြားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် မရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းနည်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာ မှတစ်ဆင့်အရေးကြီးတဲ့ သတင် အချက်အလက် တွေကိုတော့ အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ဝေမျှပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်ပမှာနေထိုင်သူတွေလည်း မိသားစုဝင်တွေကို တွေ့ဖို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလို့ မရနိုင်သေးတဲ့အခြေအနေရောက်နေ ရပါတယ်နော်။ ကျောင်းပြီးလို့ ပြန်လာရတော့မယ့် အချိန်မှာ စစ်ကောင်စီမှအာဏာသိမ်းသွားတာကြောင့် ပြန်လာလို့ မရနိုင်သေးပဲ ဖြစ်နေရပါ တယ်နော်။
ဒီနေ့လေးမှာလည်း ခေးက ” It’s still the 3rd in the USA but it’s already the4th in any other places in the world so, Happy 4th Anniversary #Khayhtet ❤️🎆🎊🎉I love seeing how you let love takes place in your family. I love seeing both of you and Liam growing intoahealthyfamily. I am forever grateful for you guys❤️4years down but forever to go, my love❤️ #yunwaddyxstories ” ဆိုပြီး မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက်ခင်ပွန်းဖြစ်ူကို ဆုတောင်းပေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.. ပရိသတ်ကြီးလည်း ခေးတို့အတွက် ဆုတောင်းစကားလေး ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ တစ္ခ်ိန္ကေအာင္ျမင္မႈထိပ္ဆုံးမွာ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့အကယ္ဒမီမင္းသားႀကီးလြင္မိုးကိုေတာ့ လူတိုင္းသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္.. လြင္မိုးကေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုလည္း ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္နိုင္ၿပီး ခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးေတြနဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့စီ းပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္လို႔ ေျပာလို႔ရေနပါၿပီေနာ္…
လြင္မိုးကေတာ့ အႏုပညာမ်ိဳးဆက္ေလးျဖစ္တဲ့ သမီးျဖစ္သူ ယြန္းဝတီလြင္မိုး နဲ႕အတူေျမးေလးျဖစ္သူ Liam ေလးကိုလည္း ပရိသတ္ေတြကခ်စ္ခင္အားေပးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္..ယြန္းဝတီလြင္မိုးကေတာ့ လက္ရွိမွာ ျပည္ပနိုင္ငံ တြင္ ပညာသင္ၾကားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္ မရတဲ့အတြက္လည္း ဝမ္းနည္းေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း သူမရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာ မွတစ္ဆင့္အေရးႀကီးတဲ့ သတင္ အခ်က္အလက္ ေတြကိုေတာ့ အခ်ိန္နဲ႕တစ္ေျပးညီ ေဝမွ်ေပးေနတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပမွာေနထိုင္သူေတြလည္း မိသားစုဝင္ေတြကို ေတြ႕ဖို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကို ျပန္လာလို႔ မရနိုင္ေသးတဲ့အေျခအေနေရာက္ေန ရပါတယ္ေနာ္။ ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ျပန္လာရေတာ့မယ့္ အခ်ိန္မွာ စစ္ေကာင္စီမွအာဏာသိမ္းသြားတာေၾကာင့္ ျပန္လာလို႔ မရနိုင္ေသးပဲ ျဖစ္ေနရပါ တယ္ေနာ္။
ဒီေန႕ေလးမွာလည္း ေခးက ” It’s still the 3rd in the USA but it’s already the4th in any other places in the world so, Happy 4th Anniversary #Khayhtet ❤️🎆🎊🎉I love seeing how you let love takes place in your family. I love seeing both of you and Liam growing intoahealthyfamily. I am forever grateful for you guys❤️4years down but forever to go, my love❤️ #yunwaddyxstories ” ဆိုၿပီး မဂၤလာႏွစ္ပတ္လည္ေန႕အတြက္ခင္ပြန္းျဖစ္ူကို ဆုေတာင္းေပးလာတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေခးတို႔အတြက္ ဆုေတာင္းစကားေလး ေရးေပးခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္..
ဝမ်းရေးအတွက် ငှက်လေးတွေရောင်းပြီး ဖြေရှင်းနေရတဲ့ အသက် (၆၆)နှစ်အရွယ် အဖိုးကို ကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ မိုးစက်
တစ်ဦးတည်းသောသမီးလေးပီပီ အချစ်ဆုံးဖေဖေ့အတွက် အချစ်တွေအပြည့်နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်